China 99% Diethylene glycol monoethyl ether acetate (DCAC) CAS 112-15-2 စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | သီအိုရီ
99% Diethylene glycol monoethyl အီအက်စစ်အက်စစ် (DCAC) CAS 112-15-2
DCAC ကို emulsion ဆေးသုတ်ဆေးအဖြစ်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောပျော်ဝင်ခြင်းနှင့်
အငွေ့ပျံမှုနှေးကွေးသောကြောင့်နိုက်ထရိုကလာစလိုသုတ်ဆေးခြောက်ခြင်း၊ သဘာဝဆေးသုတ်ဆေးများသို့မဟုတ်ရေမှုန်ရေမွှားများထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အကောင်းဆုံးအရည်ပျော်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ပိုးသတ်ဆေးများထုတ်လုပ်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည် အီလက်ထရောနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖန် panel ကိုများအတွက်သန့်စင်ခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းအေးဂျင့်အဖြစ်။
အရည်အသွေးမြင့် 99% Diethylene glycol monoethyl အီအက်စစ်အက်စစ် (DCAC) CAS 112-15-2
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Diethylene glycol monoethyl ether acetate (DCAC)
အဆင့် - 99% min
Ethylene glycol monoethyl အီအက်စစ်အက်ဆစ်စီးရီး (CAC, DCAC)
ပစ္စည်း Ethylene glycol monoethyl အီအက်စစ်အက်စစ် (CAC) Diethylene glycol monoethyl အီအက်စစ်အက်စစ် (DCAC)
မော်လီကျူးပုံသေနည်း CH3အိပ်ရာ2CH2OC2H5 CH3အိပ်ရာ2CH2OCH2CH2OC2H5
အသွင်အပြင် အရောင်နှင့်ရှင်းလင်းသောအရည် အရောင်နှင့်ရှင်းလင်းသောအရည်
သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု (GC)% ≥ 99.5 99.0
ပေါင်းခံအကွာအဝေး (℃ / 760mmHg) 154.0-160.0 213.0-223.0
အစိုဓာတ် (KF)% ≤ ၀.၀၅ ၀.၀၅
အက်စစ် (HAC ကဲ့သို့)% ≤ ၀.၀၂ ၀.၀၃
တိကျသောဆွဲငင်အား (d4)20) 0,973 ± 0,005 1,010 ± 0,005
အရောင် (Pt-Co) ≤ 10 10
အထုပ်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 200KGS / ဗုံအန္တရာယ်ရှိသောဓာတုပစ္စည်း 200KGS / ဘုံဓာတုစည်
CAC အဓိကအားဖြင့်သတ္တု၊ အရည်အတွက်ဆေးမှုန်ရေမွှားဆေးသုတ်ဆေးများနှင့်စုတ်ဆေးဆေးများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုအကာအကွယ်ဆေး၊ ဆိုးဆေး၊ အစေး၊ သားရေ၊ သတ္တု၊ ဖန်စသည်တို့၏မာကျောသောမျက်နှာပြင်၏သန့်စင်ရေးဖော်မြူလာတွင်အသုံးပြုသည်။ ; နှင့်ဓာတုဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
DCAC emulsion ဆေးသုတ်၏ဓါတ်ကူပစ္စည်း coalescing အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အလွန်ပျော်ဝင်လွယ်သောကြောင့်အငွေ့ပျံစေသောမြန်နှုန်းကြောင့်၎င်းသည်နိုက်ထရိုကလာစလိုဆေးသုတ်ခြင်း၊ သဘာဝဆေးသုတ်ဆေးများသို့မဟုတ်ရေမှုန်ရေမွှားများထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အကောင်းဆုံးအရည်ပျော်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ပိုးသတ်ဆေးများထုတ်လုပ်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည် အီလက်ထရောနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖန် panel ကိုများအတွက်သန့်စင်ခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းအေးဂျင့်အဖြစ်။
ရှေ့သို့ အရည်အသွေးမြင့်မားသော 95% Dipropylene glycol monobutyl အီ (DPNB) CAS 29911-28-2
နောက်တစ်ခု: ကောင်းသောစျေးနှုန်း Trisodium Orthophosphate Anhydrous Food Additive TSP cas 10124-56-8
Diethylene glycol monoethyl အီ acetate
အီလက်ထရောနစ်အဆင့် Ethylene glycol monoethyl ethe ...
Ethylene glycol monobutyl အီ acetate စီးရီး ...
E စီးရီးများမပြည့်စုံသော Block Polyethers (MAPEN ...
Ethylene glycol propyl အီစီးရီး (EP, DEP) / ...
အရည်အသွေးမြင့် 99.5% Ethyl 3-ethoxypropionate (EEP ...
Ethylene glycol monoethyl အီ acetate စီးရီး ...